ओलीको सपना मन पराएको मान्छे हजुर म
classickhabar २०७४ जेठ २२ सोमबार प्रकाशित
प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना पछि समय नपुगी पटक पटक भएका सरकार परिवर्तनले जनतामा के सन्देश दिएको छ भने प्रधानमन्त्री न देशका भएका छन् , न पार्टीका भएका छन् यीनीहरुलाई त गुटको प्रधानमन्त्री मात्र मानिएको छ । यहि कटूनीतिको शिकार हिजो देखि आजका प्रधानमन्त्री भएका छन् । पछिल्लो समय सामाजिक संजालको बढ्दो प्रयोगले सकारात्मक भन्दा नकारात्मक टिप्पणी गर्नेको झुण्ड एकाएक बढिरहेको छ । कतिखेर कस्ले के बोल्ला र उपहास गर्न पाउँला भनेर अहोरात्र आँखा उघार्नेहरु यता उता देख्न सकिन्छ ।
संसारले बिकास र प्रबिधिमा ठुलो फड्को मारीसक्यो तर हामीहरु युवा निर्यात गरेर खाडीको ५० डिग्रीमाा समृद्धिको गफ हाँकिरहेका छौँ, दिनहुुँ युवालाई बिदाई गरेकै छौ । धन्न रेमिट्यान्सले हाम्रो चुल्हो बलेको छ नत्र के के हुन्थ्यो । यस्तै कठिन समयमा न हाम्रो राजनीतिमा स्थायित्व छ न त प्रकृतिले नै साथ दिएको छ नत हाम्रा मित्र राष्ट्रको नै इमानदारी देखिएको छ । भनिन्छ राजनीतिले देश बदल्छ, बदल्नुपर्छ तर आफू र आफ्ना कार्यकर्ताको मात्र जीवनस्तर मात्र बदल्ने राजनीतिले जनतामा वितृष्णा पक्कै ल्याएको छ ।कुनै पनि देशको जनताले चुनेको दल र उनैले चुनेको प्रधानमन्त्री पद आफैमा खराब कसरी हुन्छ ? खराब बनाउने र खराब साबित गर्नमा तपाई हामी जस्ता हनुमान कार्यकर्ता, टाट आलोचक र सुषुप्त नागरिक र सत्यता बंगाएर लेख्ने कलमचरी पत्रकारको पनि कम दोष छैन ।
जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले पूरा समय काम गर्न नपाउँदै बन्ने नयाँ नयाँ सत्ता समीकरणले देशको अर्थतन्त्र र जनताको मन लाई धुजा धुजा पारेको छ । हिजो गिरीजा प्रसाद कोईराला, मनमोहन अधिकारी, शेर बहादुर देउवा , प्रचण्ड , बाबुराम,झलानाथ माधव लगायत सबैजसो प्रधानमन्त्रीहरु यहि प्रबृर्तिको शिकार भएकै हुन् । अझै पनि प्रगतिशील ठानिएको संबिधानमा प्रत्यक्ष निर्वा्चित कार्यकारीको ब्यवस्था नहुनुको पीडा अहिले देशले भोगिरहेको छ , हामीले भोगिरहेका छौ ।
अझैसम्म भुकम्प पिडितहरु पालमुनि छन् , कालो बजारी बढिरहेकै छ, भ्रष्टाचार बढिरहेकै छ, युवाहरु बिदेशिएकै छन, आन्दोलनहरु भईरहेकै छन, बिवादित निर्णयहरु भईरहेकै छन, देशका हरेक क्षेत्र तहस नहस छन् । यसै बेला बिमतीका स्वरहरुले गणतन्त्र र धर्म्निरपेक्षतालाई सरापिरहेका छन् मानौ यी दुबै अभिसाप थिए । बोलेका कुरामा गुणात्मक सुधार भएकै छैन तर सुधार गर्ने काममा नागरिक, दल, कर्मचारीतन्त्र, गैरसरकारी संस्था, पत्रकार आदिले गर्ने दायित्व के हामीले पूरा गरेका छौ त ? भुतपुर्व प्रधानमन्त्रीले धेरै कुरा बोलेर जनता हँसाएका पक्कै हुन तर देशघाती कुरा गरेका थिएनन देश कसैलाई सुम्पने कुरा गरेका थिएनन, स्वर्गमा सिँढी बनाउछु भनेका थिएनन । आकासमा शहर बनाउँछु भनेका थिएनन, उनले बोलेका धेरै कुराहरु तथ्य र लक्ष्य नजिक छन् । ओलीका बेला बेलाका बोलीहरुले जनतालाई सपना देखाएका छन् , अहिलेको युगमा बिकास र समृद्धिको सपना देख्नु पनि के अभिसाप हो र ? यसलाई खोक्रो राष्ट्रवाद भन्नेहरुले सोचौँ यो भन्दा पहिलेका कुन प्रधानमन्त्रीको स्वादिलो राष्ट्रवाद देख्नु भो ? तिनै वलीले बोलेका कुराहरु अहिले बजेटमा छन ।
के अझै पनि हामीले दास भएको, अशिक्षित भएको, अभाव भएको र दबिएको दबाईएको सपना देखिरहने हो र ? के फेरि पनी भद्र सहमति भन्दै सरकार फेरिरहने होकि ? केहि गर्ने हो ? जस्ले सोच्छ , त्यसैले सपना देख्छ, र सपना देख्नेले बाटो पनि ठम्याउँछ ।
यसै गरि हरेक प्रधानमन्त्रीलाई कसैले उडाएर, त कसैले समीकरण बदलेर, त कसैले देश बिदेश हार गुहार गरेर बोल्न र गर्न नदिने हो भने देश कसरी बन्छ ? एउटा सरकारले आफ्नो हनिमून मनाउन नपाउँदै कुर्सी धरापमा परिरहने हो भने देश कहिले उँभो लाग्ने ?अहिले प्रचण्ड सरकार थियो ठिकै थियो राजीनामा किन दिइयो?केको भद्र सहमती? राजिनामा नदिए नेपाल माथिको आकास झर्ने वाला थियो र ? अरु केही पनि होईन देश लुटेर खाने दाउ मात्रै हो।होईन भने यो चुनावी माहोलमा सरकार किन छोडनु पर्थ्यो ? जनताको अमुल्य मतपत्र च्यात्नको लागि ?अनि फेरि तीन पटक असफल भैसकेकालाइ नै प्रधानमन्त्री बनाउन पर्छ भनेर संविधान को कुन धारामा लेखिएको छ ? गगन थापा जस्ता योग्य युवा नेता लाई प्रधानमन्त्री बनाउदा साथ देश समुन्द्रमा डुब्नेवाला छ र ?
हो ! ओलीले बोलेका सबै कुराको जादूमय समाधान यूँ हुन सक्दैन, ओली मात्र होईन भोलि जो सुकै प्रधानमन्त्री आए पनि तुरुन्त समाधान हुँदैन, त्यसका लागि समय लाग्छ । त्यतिन्जेल बरु यो काम किन भएन भनेर सहयोग सहितको खबरदारी गर्नु हाम्रो दायित्व हो कि होईन ? के देशको अभिभावक प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरालाई यति निम्नस्तरले आलोचना गर्नु सभ्य राजनीतिक संस्कार भित्र पर्छ र ? रात दिन जनताको लागि घर बनाउन खट्ने धुर्मुस सुन्तलीले गरेजस्तै सकारात्मक काम हामीले पनि गरे हुन्न र ? यदि सरकार देश प्रती बफादार हुन्थ्यो भने धुर्मुस र सुन्तलीलाई जनता समाजसेवा पदक प्रदान गर्दा देशलाई तेस्तो ठुलो नोक्सान के हुनेवाला थियो ?
त्यसैले म त भन्छु सबै प्रधानमन्त्रीहरुले सपना देख्नुपर्छस् कर्मचारी, पत्रकार, नागरिक र दलहरुले निश्चित समय सम्म सरकार बदल्ने खेल खेल्नु हुँदैन , राम्रो काम गर्नेहरुलाई जनताले पत्याउँछन् , नराम्रो काम गर्नेहरु बढारिन्छन् । अरु दल समूह र बिचारको आलोचना गर्नु भन्दा आ आफ्नो दल समूह र बिचारमा सुधार गरौँ ! मैले ओलीको सपना मन पराएको हु । हनुमान चाहिँ पटक्कै होइन,भोलि जनताको हितको लागि जस्ले राम्रो काम गर्छ म त्यही बादी ।